दुबई सिटी कम्पनी दुबई मा एक नौकरी को खोज गर्न मुद्रा को मदद
दुबई शहर कम्पनीले सहयोग माग्दै!
हाम्रो विज्ञहरूको टोलीले तपाईलाई जागिर खोजी प्रक्रियाको लागि जानकारी दिइरहेको छ। विदेशी कामदारहरूको लागि उत्तम प्रयोग। वास्तवमा दुबई सिटी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी कामदारहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको छ। मध्य पूर्वमा बीस हजार कम्पनीहरूको सम्भावित पहुँचको सामना गरौं। हाम्रो भर्ती विशेषज्ञ संयुक्त अरब एमिरेट्समा रोजगारदाताहरूसँग सम्झौता प्रबन्धन गर्दै। हामी मध्य पूर्व मा हाम्रो व्यावसायिक सेवाहरु को राम्रो उदाहरण हो। हाम्रो पोर्टलमा ग्लोबल हायरिंग एक्सपोजर रहेको छ। कतार, साउदी अरेबिया, बहरेन, लेबनान जस्ता देशहरूबाट कुवेत र इजिप्टको साथ। यी सबै स्थानहरूको साथ, विदेशी कामदारहरू भाडामा लिन सक्षम छन्।
प्रवासीहरूले प्रोफाइल अनलाइन पोष्ट गरेर काम फेला पार्न सक्नेछन्। यो बिर्सनु हुँदैन कि हामी, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार खोज्नेहरूलाई मात्र डो guiding्याउँदैनौं। दुबई सिटी कम्पनीले विदेशमा रहेका विदेशी कामदारहरूलाई शारीरिक रुपमा राख्दै छ। भारतीय कामदारहरू, दक्षिण अफ्रिकी र पाकिस्तानी पेशेवरहरू हाम्रो नि: शुल्क प्रणाली प्रयोग गरेर काम पायो। अर्कोतर्फ, हामी मध्यपूर्वमा कसलाई काममा लिइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन सहयोग गरिरहेका छौं। हाम्रो टोलीले संयुक्त अरब एमिरेट्समा उम्मेदवारलाई जानकारी दिइरहेको परिणामको रूपमा। यो कुरा निश्चित गर्न कि प्रबन्धकहरू र भर्खरको स्नातक रोजगार खोज्नेहरूले सही काम पाए।
यो सहभागी हुन 100% नि: शुल्क हो!
क्यारियर खोज्नेहरूले मूल्यवान जानकारी फेला पारे। सारांशमा तल हेर्नुहोस् र हाम्रो नयाँ जोर्नेहरू / नयाँ एक्सट्याट्स जाँच गर्नुहोस्। दुबई सिटी कम्पनीले एचआर प्रबन्धकहरूको लागि पनि यसलाई पहुँचयोग्य बनाउँदछ। तिनीहरू विश्वभर देखि युएई, कतार, साउदी अरेबिया, अमेरिका, युरोप र क्यानडामा काम गरिरहेका छन्। फिलिपिन्स, भारतीयहरू, अमेरिकीहरू, अरबी भाषी रोजगारीहरूले पनि दुबईमा प्रचार गर्नको लागि हाम्रा सेवाहरू सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेका छन्। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, लगभग कुनै कार्यकारी दुबई शहर कम्पनीमा काम पाउन सक्षम छन्। निश्चित रूप बाट हामी तपाईलाई मद्दत गर्नेछौं। दुबईमा रोजगारदाताहरू राख्नुका साथै ब्यबश्थक ब्यवस्थापकहरू पनि फेला पार्ने संभावना तपाईंले बढाउनुहुनेछ। हाम्रो कम्पनी सेवाहरू प्रयोग गरेर मूल्य प्राप्त गर्दै। अर्कोतर्फ, हामी सरकारी अधिकारका साथ सहयोग गर्दछौं। दुबई शहर कम्पनी एक मुख्य पोइन्ट हो। विशेष गरी विदेशमा काम खोज्नेहरूका लागि।
तपाईंको सफलताको कहानी साझा गर्नुहोस्
समय विश्वमा छोडियो एक्सपो 2020 दुबईमा
मंगलबार सम्मको समय, 20 अक्टूबर 2020, 12: 00: 00 (दुबई समय)
भर्खर दुबई शहर कम्पनीमा सामेल हुनुभयो
दुबईमा रोजगार खाली ठाउँहरू
दुबईमा फ्रेशर रोजगार खोज्दै हुनुहुन्छ? दुबै र सबै योग्यताको लागि दुबई नजिकै भर्खरको रोजगारहरू खोज्नुहोस् र आवेदन दिनुहोस्। 1000+ रोजगारी दुबई, युएईमा i12wrk.com मा उपलब्ध छन्। लेखाकार, बिक्री अधिकारीहरू, सफ्टवेयर क्षेत्रहरू, ग्राहक समर्थन प्रतिनिधि, रिसेप्शनिस्ट, सहयोगी र अधिक! युएई को अग्रणी रोजगार खोज अनुप्रयोग र क्षेत्र मा वास्तविक र प्रमाणित रोजगार खोज्नका लागि गुगल नक्सा प्रयोग गरी साइट। यदि तपाईं इच्छुक उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने पूर्ण-समय वा पार्टटाइम रोजगारीका अवसरहरू खोज्दै हुनुहुन्छ वा भर्नको लागि खाली ठाउँ हुनुहुन्छ भने, खोजीलाई आई १२ डब्ल्यूआरकेको सबैभन्दा प्रभावकारी तरीकामा अन्त्य गर्नुहोस्। अब अनलाइन आवेदन गर्नुहोस्: https://i12wrk.com Via एप्पल अनुप्रयोगको माध्यमबाट लागू गर्नुहोस्: https://apps.apple.com/us/app/i12wrk/id12?ls=1320833147 एन्ड्रोइड अनुप्रयोग मार्फत लागू गर्नुहोस्: https://play.google। com / store / apps / Details? id = com.i1wrk.i12wrkphone & hl = en थप विवरण जाँच गर्नुहोस्: https://www.facebook.com/i12wrk/
मजीद अल जोहीरी +49 (०) १0२०17620664525
मैले जर्मनीमा मेरो बुजस हाईस्कूल गरे र क्यानाडामा तीन महिनादेखि काम गर्दैछु र अब अबू धाबीमा काम गर्न जान चाहान्छु।
इन्भेन्टरी अफिसर - अल बोर्ग मेडिकल लेबोरेटरीज को
Area क्षेत्र स्टोरमा स्टक कायम राखी रिस्टकि level स्तर अन्तर्गत स्वीकृत मात्रा भन्दा बढि हो।
Actual वास्तविक खपतमा आधारित प्रत्येक विशेष अनुरोधको बिरूद्ध आइटमको उचित जारी।
Consumption खपत आन्दोलन, शून्य अपव्यय र फ्रीज सूची निगरानी।
Len पुनः भण्डारन योजना अनुसार खपतको रूपमा शेयरको समयमै रिफिलिंगका लागि मुख्य गोदामसँग समन्वय।
Item आईटम आन्दोलन नियन्त्रण र अनुगमनका साथै समाप्ति।
प्रणालीमा वास्तविक इन्भेन्टरीसँग मिल्दो शारीरिक साथ गणना गर्दै आवधिक इन्भेन्टरी प्रदर्शन गर्दै
मिति प्रकाशित: 2020-01-07
नौकरी स्थान: पूर्वी प्रांत, सऊदी अरब
रोजगार भूमिका: खरीद र खरीद
कम्पनी उद्योग: प्रयोगशाला र गुणवत्ता नियन्त्रण
क्यारियर स्तर: मध्य करियर
वातावरणीय समन्वयक - बेरेसफोर्ड विल्सन र पार्टनरहरू
हाम्रो ग्राहक एक प्रमुख पूर्वाधार सम्झौता संगठन हो र कतार मा आफ्नो कार्यालय को लागी एक वातावरणीय समन्वयक को लागी हेरिरहेका छ।
तपाईं यसको लागि जिम्मेवार हुनेछ
साइट व्यवस्थापन, समन्वय, अनुगमन र निरीक्षणको साथ सहयोग गर्दै
विभिन्न वातावरणीय र दिगोपन पक्षहरु मा रिपोर्ट गर्दै
वातावरणीय विज्ञान वा ईन्जिनियरि Management व्यवस्थापन डिग्री
प्रासंगिक क्षेत्रमा न्यूनतम relevant बर्षको अनुभव
हाल कतारमा आधारित हुनुपर्दछ
एक NOC प्राप्त गर्न सक्षम हुनु पर्छ
नौकरी स्थान: दोहा, कतर
रोजगार भूमिका: गुणस्तर नियन्त्रण
कम्पनी उद्योग: निर्माण र भवन
मासिक तलब: यूएस $ 2,000